‘राष्ट्रपतिको भूमिका सन्तोषजनक भएन’ «
जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका कार्यकारिणी समिति सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक भविष्य अध्याँरो सुरूङमा पसिसकेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले भने, “उहाँ आफूले खनेको खाल्डोमा आँफै फस्नुभएको छ । उहाँले आफ्नो खुट्टा आफैँ काट्नुभएको छ । कालिदासले हाँगामा बसेर रुख काटेजस्तै, केपी ओली भनेको वर्तमान युगको कालिदास सावित भएका छन् । अब मेरो विचारमा केपी ओलीजीको पार्टीको मान्यता समाप्त हुन्छ । उहाँले या त नयाँ राजनीतिक पार्टी गठन गर्नुप¥यो, या त राजनीतिबाट सन्याश लिनुपर्ने अवस्था छ । अलिकति पनि इज्जत जोगाउने हो भने नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिँदा राम्रो हुन्छ ।”
बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै नेता श्रेष्ठले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिका पनि सन्तोषजनक नभएको टिप्पणी गरेका छन् ।
कांग्रेस, नेकपा दाहाल–नेपाल समूह र जसपा तीन दलको संयुक्त रूपमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको नाम अघि बढ्छ ? भनेर सोधिएको प्रश्नमा उनले भने, “तीन दल हुन्छ कि कांग्रेस र नेकपामात्रै हुन्छ ? यो टुँग्गिएको छैन । नेकपाको आन्तरिक विभाजन जो छ, कानुनी रुपमा पूर्णता पाओस् । तर, गठबन्धन चाहिँ प्राकृतिक हुनुपर्छ । अग्रगामी हुनुप¥यो । समृद्धि र सुशासनतर्फ जानेखालको हुनुपर्छ । विगतको समस्याका एक–आपसमा बसेर समीक्षा गरौं । नयाँ आधार कसरी बन्छ ? अनिमात्रै तय हुन्छ ।”
नेकपा दाहाल–नेपाल समूहका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालसँग आफूसहित जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोेको भेटवार्ता भएको उल्लेख गर्दै उक्त भेटमा दाहाल–नेपालले अहिलेको नयाँ परिस्थितिमा अब कसरी बढ्ने भन्नेबारे छलफल गर्ने कुरा राखेको पनि उनले सुनाए ।